तपाईले नियमित पानी पिउने बानी छैन ? यि र यस्ता रोग लाग्ने निश्चित छ – Etajakhabar
तपाईले नियमित पानी पिउने बानी छैन ? यि र यस्ता रोग लाग्ने निश्चित छ
पर्याप्त पानी खाएको कसरी थाहा पाउने दैनिक कति पानी पिउनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा अनेकौं भनाइ छन् । पछिल्लो समय भएका अध्ययनले भने लिंग र शरीरको आकाररवजन अनुसार पिउन आवश्यक पानीको मात्रा बताउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि एक जना साढे ६ फिट अग्लो पुरुषले दैनिक ८ ग्लास पानी पिउनु कम हुनसक्छ भने ४ फिट १० इन्च अग्ली महिलाका लागि यति नै पानी पिउनु धेरै हुन सक्छ ।
तर सम्झनुहोस्, तिर्खा लागेको महसुस गर्नुहुन्छ भने सम्भवतः तपाईंलाई हल्का पानीको कमी भइसकेको छ । मुख सुक्छ भने पानीको कमी हटाउन तुरुन्तै एकरदुई कप पानी पिइहाल्नुहोस् । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १५, २०७४ समय: ८:१०:५९